Samee warshad iyo soo saaraha cosmetics-ka ee loo yaqaan 'cosmetics' | Bandhigga Bandhigga
Qurxinta Banffee - Warshada Qurxinta Xirfadlayaasha& Soo saaraha Qurxinta La Habeeyay
Ku saabsan Banflee
Mashiin ah soo-saarista
Waxyaabaha dabiiciga ah
Alaabada lagu qurxiyo indhaha
Qalab indha intoosan
Soojiidashada waxyaabaha qurxinta
Highlive & Bronzer
Aasaaska dareeraha ah
STOP oo wuxuu ku raaxaysan quruxdaada
Ha Banffee Faafidda sminke Si walba oo adduunka dacalladiisa The! Annagu waxaannu nahay xirfad OEM & ODM isku qurxiyo saaraha.
Banffee sminke waa xirfadlesamaysan warshad iyo waxyaalaha la isku qurxiyo saaraha ee Shiinaha ee dhammaan noocyada kala duwan ee la isku qurxiyo indhaha, isku qurxiyo wajiga iyo isku qurxiyo dibnaha. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah lipstick, palettes eyeshadow, eyeliners, aasaaska, budada cadaadisay, highlighter& bronzer, iwm
Banffee sminke waa isku qurxiyo saarayaasha jumlada in ay leeyihiin isku qurxiyo brand noo gaar ah, waayo, jumlada iyo sidoo kale bixin OEM / adeeg ODM.
Waxaan nahay OEM xirfadeed& ODM saaraha qurxiyo, Kaas oo nooc cilmi baadhista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibka ka mid ah. Waxaan ka helay sumcad wanaagsan for our qalabka sare, kooxda iibka xirfadeed, R xoog& D kooxda muddo ka badan 10 sano, ka qeybinayay of alaabta ceeriin ka soo adduunka oo dhan. Banffee sminke bixisaa serivce caadadii xirfadeed ee dhammaan noocyada kala duwan ee wax soo saarka la isku qurxiyo. Haddii aad raadinayso isku qurxiyo saaraha OEM, nala soo xiriir.
Wax soo baara:Macaamiisha u sheeg foomka factor la doonayo, caddaymaha waxqabadka, wareegga nolosha, iyo shuruudaha waafaqsan.
U samaynta: kooxda design waxaa ku lug leh laga bilaabo mashruuc si loo hubiyo in wax soo saarka ugu fiican caadadii loogu talagalay in baahiyaha macaamiisha joog '.
Maamulka Tayada: Si loo siiyo qaab-dhismeedka tayo sare leh, ee aanu hayno wax ku ool ah& hufan Management System Tayo.
Banffee sminke bixisaa xalal hal-stop for noocyada qurxiyo bilowga: siin taxanaha buuxa ee adeegyada ahaanayta sida design brand, design baakadaha wax soo saarka, falanqaynta boos badnaa suuqa brand, horumarka wax soo saarka iyo wax soo saarka, tababarka iibka alaabta, iwm
Sida samaynaysaa a ilaa warshad / soo saaraha leh 16 sano oo waayo aragnimo ah, Banffee sminke waa awoodaan in ay bixiyaan isku qurxiyo oo tayo sare leh ee qiimaha tartan rasmi ah.
16 sano waayo-aragnimo
waxyaabaha la fadilay kaliya by macaamiisha gudaha, laakiin sidoo kale dhoofiyo Southeast Asia, Bariga Dhexe, Afrika, EA ...
caddeyn badan oo
Waxaan ka helay sumcad wanaagsan for our qalabka sare, kooxda iibka xirfadeed.
Banffee siin karaan formula kartoo, baakadaha kartoo, design free, adeegga iyo sidoo kale servic ka dib-iibinta maraakiibta ...
cadaawada free& vegan
taxane roduct ka mid ah eyeshadow, lipstick, lipgloss, labeenta dibnaha, suni, eyeliner, concept, aasaaska, highlighter, c ...
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. la aasaasay 2015. Its xarunta iyo R&D salka ku yaalaan Jianggao Town Industrial Park, Degmada Baiyun, Guangzhou City, taas oo uu leeyahay jawi taajir dhaqanka. focus on Shirkadda silsilad horumarinta, design, wax soo saarka, iibka iyo sahayda ee la isku qurxiyo farsmada heerka sare ah, samaynaysaa a dhafan ilaa warshad iyo isku qurxiyo kartoo soo saaraha.
Ka dib markii horumarinta 7 sano, Banffee sminke helay ISO22716, GMP, SGS, caddeyn FDA, oo uu leeyahay gaar ah cilmi-baarista iyo horumarinta kooxda farsamo, oo baaxad weyn oo workshop-soo-saarka GMPC, qalabka wax soo saarka si buuxda automatic casriga ah, iyo sahayda caalamiga ah silsiladda galinta wax cayriin. Hadda waxay noqotay shirkadda alaabta qurxiyo a si fiican u yaqaan in industry ee la isku qurxiyo, ka soo bax ay KILLFE brand u gaar ah. Haddii aad raadinayso samaynaysaa xirfadeed oo lagu kalsoonaan karo ilaa warshad / qurxiyo saarayaasha OEM, soo dhaweyn nala soo xiriir.
16 sano oo waayo aragnimo ah ee degaanka Cosmetics.
Xaqiijin shirkadda la caddeyn badan.
Adeegga One-stop for macaamiisheena.
Halkan waxaa wararkii ugu dambeeyay ee naga shirkadda iyo warshadaha. Read posts, kuwaas oo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wax soo saarka iyo warshadaha iyo sidaas heli waxyoonay ee aad mashruuca. Waxaan si xoog leh ay aaminsan yihiin in waa in aan si ay u bartaan in maqaarka si fiican u labisan a gaari karo waxyaabo badan oo aan marnaba la rogmato aad qabsan karo.
Top Holiday Eyeshadow Palettes at sminke Banffee
kala duwan cajiib ah oo eyeshadow fasax palettes at Banffee. ka midabada qurux badan oo midabo kala reebo, waxaa jira dhowr ...
Banffee sheyga cusub
--Following waxyaabaha daryeelka maqaarka aasaasiga ah, Banffee bilaabay multi-tallaabo waxyaabaha salka qurxiyo si loo ballaariyo line saarka jira ...
Clear Dibno dalaka - ILAALI Your Bayjer dhawrsan Maalinta oo dhan
Like wax soo saarka qurxiyo kasta, safay dibinta cad waxay nolosha ka dhigaysa mid sahlan. Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo sida uu u hortago smudgi ...
The Faa'iidooyinka Dabiiciga ah Dibno gloss iyo Sida loo Select Best Dabiiciga ah Dibno gloss
#Best glosses dibinta dabiiciga ah waa daawo dhabta ah ee qalleel iyo dillaac bushimaha aadanaha. Riix halkan si aad u ogaadaan sida ay faa'iido yihiin ...
Xagee Ku rid Highlighter on Face ah?
Talaabo talaabo ah oo ku saabsan meesha laga saaray highlighter wajiga iyo codsan highlighter si wanaagsan foolkaaga, dhabannada, iyo sanka ...
Waa kuwee Bayjer waa Best for Daily Isticmaalka?
Hey, aynu ku sii dabajiraan!
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan alaabta ama adeegyada,
si xor ah u gaadhaan kooxda adeegga macaamiisha.
Sidee Waxaan Ma Waxaa Kulan Oo Qeex Global
Waxa ugu horreeya ee aan qaban waxaa la kulmay macaamiisha iyo hadal dhex gool ay mashruuc mustaqbal.
Intii lagu guda jiray shirka, si xor ah u xiriiraan aad fikrado iyo weydiiso su'aalo badan.
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2015. Waxaan diiradda saareynaa horumarinta, naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta iyo silsiladda sahayda ee farsamada sare ee qurxinta.
Cinwaanka: Qolka 307, Dhismaha 4, No. 4, Xarunta Madaarka Greenland, Degmada Huadu, Guangzhou